ဂျပန်ယန်းငွေနှင့် တရုတ်ယွမ်ငွေ တို့အား နိုင်ငံတကာငွေပေးချေမှုနှင့် စာရင်းရှင်းလင်းမှုများဆောင်ရွက်နိုင်သော ငွေကြေးများအဖြစ်စတင်သတ်မှတ် | Jewellery Luck Group of Companies 缅甸宝运集团
Cultural & Management
Jewellery Luck Foundation
Home ဂျပန်ယန်းငွေနှင့် တရုတ်ယွမ်ငွေ တို့အား နိုင်ငံတကာငွေပေးချေမှုနှင့် စာရင်းရှင်းလင်းမှုများဆောင်ရွက်နိုင်သော ငွေကြေးများအဖြစ်စတင်သတ်မှတ်
ဂျပန်ယန်းငွေနှင့် တရုတ်ယွမ်ငွေ တို့အား နိုင်ငံတကာငွေပေးချေမှုနှင့် စာရင်းရှင်းလင်းမှုများဆောင်ရွက်နိုင်သော ငွေကြေးများအဖြစ်စတင်သတ်မှတ်
Deprecated function: The each() function is deprecated. This message will be suppressed on further calls in _menu_load_objects() (line 579 of /home/jlgroupm/public_html/includes/menu.inc).
၂၀၁၉ခုနှစ် ဇန်နဝါရီလ ၃၀ရက်နေ့တွင် မြန်မာနိုင်ငံဗဟိုဘဏ် ညွှန်ကြားချက်အမှတ် (၄/၂၀၁၉)အရ ဂျပန်ယန်းငွေ (Japanese Yen) နှင့် တရုတ်ယွမ်ငွေ (Chinese Yuan - RMB) တို့အား နိုင်ငံတကာငွေပေးချေမှုနှင့် စာရင်းရှင်းလင်းမှုများဆောင်ရွက်နိုင်သော ငွေကြေးများအဖြစ်စတင်သတ်မှတ်
မြန်မာနိုင်ငံဗဟိုဘဏ်မှ ယခင်တွင် အမေရိကန်ဒေါ်လာ (US Dollar)၊ ယူရို (Euro) နှင့် စင်ကာပူဒေါ်လာ (Singapore Dollar)အစရှိသော ငွေကြေးများအား ခွင့်ပြုထားပြီးဖြစ်ပြီး ယခုအခါမြန်မာနိုင်ငံတွင် တစ်နှစ်လျှင် အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၆ ဘီလီယံတန်ဖိုးလဲလှယ်နေရသော တရုတ်ယွမ်ငွေများ ထပ်မံခွင့်ပြုခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။
၂၀၁၈ခုနှစ် နှစ်ကုန်ပိုင်းတွင် စီးပွားကူးသန်းဝန်ကြီးဌာနမှ တရုတ်ယွမ်ငွေအား စာရင်းရှင်းလင်းမှုများတွင် စောင့်ရွက်နိုင်ရန်အတွက် ICBC နှင့် ဆွေးနွေးခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။
မြန်မာနိုင်ငံ ဗဟိုဘဏ်မှ တရုတ်နိုင်ငံယွမ်ငွေများအား တရားဝင် စာရင်းရှင်းလင်းနိုင်သောငွေအဖြစ် သတ်မှတ်ပေးလိုက်ခြင်းကြောင့် စီးပွားရေးကူးသန်းရောင်းဝယ်မှုကို များစွာအထောက်အကူဖြစ်စေခဲ့ပြီး နှစ်နိုင်ငံကြားတွင်ရှိသော ကုန်ထုတ်၊ ကုန်သွင်းလုပ်ငန်းတို့မှာလည်း များစွာ လွယ်ကူအဆင်ပြေစွာဆောင်ရွက်နိုင်သွားမည်ဖြစ်ပါသည်။
ဗဟိုဘဏ်မှ ယင်းကဲ့သို့ ခွင့်ပြုလိုက်ခြင်းဖြင့် တရားမဝင်သော ငွေကြေးလဲလှယ်မှုများ ပပျောက်သွားမည်ဖြစ်ပြီး စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများအနေဖြင့် နယ်စပ်ဒေသများအား မှီခိုစရာမလိုပဲ ငွေကြေးများကို တရားဝင်လဲလှယ်သွားနိုင်မည်ဖြစ်ပါသည်။ ယခင်အခါက တရုတ်ငွေကြေးလဲလှယ်ခြင်းပါက တရားမဝင်ငွေကြေးလဲလှယ်သူများထံမှ အမေရိကန်ဒေါ်လာများမှ တဆင့်လဲလှယ်ရခြင်းကြောင့် လဲလှယ်ခြင်းစရိတ်များစွာဆုံးရှုံးလျက်ရှိရာမှ ယခုကဲ့သို့ တရားဝင်လဲလှယ်နိုင်ခြင်းကြောင့် ငွေကြေးဆုံးရှုံးမှု နည်းပါးပြီး ထုတ်ကုန်၊ သွင်းကုန်ဆိုင်ရာလုပ်ငန်းများကို အလွယ်တက
ူဆောင်ရွက်တော့မည်ဖြစ်ပါသည်။ သို့သော်လည်း ထိုငွေကြေးလဲလှယ်မှုများကို နိုင်ငံခြားသုံးငွေများ ရောင်းဝယ် ဖောက်ကားသည့်လုပ်ငန်း (Authorized Dealer - AD) လိုင်စင်ရဘဏ်များတွင်သာ ဂျပန်ယန်း (Japanese Yen) နှင့် တရုတ်ယွမ် (Chinese Yuan) တို့အား နိုင်ငံတကာငွေပေးချေမှု၊ စာရင်းရှင်းလင်းမှုများ နှင့် AD လိုင်စင်ရဘဏ်များအချင်းချင်း စာရင်းဖွင့်ပေးခြင်းတို့မှ အပ လူပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးချင်း (သို့မဟုတ်) တရားဝင်အဖွဲ့အစည်းများတွင် ငွေစာရင်းဖွင့်လှစ်ဆောင်ရွက်နိုင်မည် မဟုတ်ကြောင်း မြန်မာနိုင်ငံဗဟိုဘဏ်မှ ညွှန်ကြားထားပါသည်။